people Nepal » साझा बसमा ट्राभल कार्ड, ढोकाको मेसिनले नै भाडा उठाउने ! साझा बसमा ट्राभल कार्ड, ढोकाको मेसिनले नै भाडा उठाउने ! – people Nepal
साझा बसमा ट्राभल कार्ड, ढोकाको मेसिनले नै भाडा उठाउने !
Posted on February 3, 2017 by Durga Panta
२१ माघ, काठमाडौं । साझा यातायातले केही दिनभित्रै आफ्ना बसमा ‘स्मार्ट ट्राभल कार्ड’ को प्रयोग सुरु गर्ने भएको छ । लामो समयको परीक्षण पछि साझाले लगनखेलबाट नयाँ बसपार्क जाने १० बसबाट ट्राभल स्मार्ट कार्डको प्रयोग सुरु गर्न लागेको हो ।
यसका लागि ति सबै बसमा स्मार्ट कार्डबाट भुक्तानी लिने मेसिन जडानको काम सकिएको साझा यातायातका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेयले जानकारी दिए ।
‘अबको केही दिनभित्रै सर्वसाधारणले यो रुटमा चढ्दा स्मार्ट कार्डबाटै भाडा तिर्न सक्नेछन्’ पाण्डेले भने । बसका ढोकामा स्मार्ट कार्डको डिभाइस राखिएको छ । अब सो रुटमा नियमित यात्रा गर्ने सर्वसधारणले पनि स्मार्टकार्ड किन्न पाउने छन् । यसको प्रयोग स्वेच्छिक हुनेछ ।
सुरुवातमा एउटा रुटबाट सुरु गरिएपवनि विस्तारै सबै रुटमा चल्ने बसमा यो सेवा सुरुवात गरिनेछ । बस चढ्दा यो कार्ड ढोकामा जोडिएको डिभाइसमा देखाउनुपर्नेछ भने ओर्लिँदा पनि यसलाई देखाउनुपर्नेछ ।
यसले आफैं यात्रा गरेको दूरीअनुसार भाडा काट्नेछ ।
के हो ट्राभल कार्ड ?
स्मार्ट ट्राभल कार्ड गाडी भाडा भुक्तानीमा प्रयोग हुने कार्ड हो । यो कार्ड एक महिनापछि साझा यातायातले आˆनै कार्यलयबाट बिक्री सुरु गर्नेछ ।
यो कार्ड लिएर हिडेका यात्रु चढेको र झरेको दुरीका आधारमा ढोकामा जोडिएको डिभाइसले स्मार्टकार्डबाट रकम काट्नेछ ।
यसको रिचार्जका लागि साझाको कार्यालयमै सम्पर्क गर्न सकिने छ । बसका सहचालकलाई रकम बुझाएर पनि कार्ड रिचार्ज गर्न सकिन्छ । पछि रिचार्जका लागि अझै सरल ब्यवस्था गरिनेछ ।
काटिएको रकम नेपाल बैंकको साझा यातायातको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ । केही समयपछि उपभोक्ताले साझाका रिचार्ज कार्ड मोबाइलको जस्तैगरी बजारमा किन्न पाउनेछन् । यसले यात्रुलाई दुरीका आधारमा भाडा तिर्न सहज हुने पाण्डेयले जानकारी दिए ।
थप १० डिलक्स बस किनिँदै
यसैबीच साझा याताको साधाराणसभाले थप १० वटा नयाँ डिलक्स बस किन्ने निर्णय गरेको छ । लामो दूरीमा सञ्चालन गर्ने गरी डिलक्स बस किन्न अब टेण्डर प्रक्रियामा जाने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी साझाले काठमाडौं महानगरपालिकाले यो वर्ष सेयरस्वरुप उपलब्ध गराएको ५ करोडको बस पनि किन्ने तयारी गरेको छ ।महानगरले सम्झौता गरेर रकम भुक्तानी गर्नासाथ टेण्डर गरिने पाण्डेयले बताए ।